गौशाला नगर पत्रकार संजालद्वारा नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सम्मान
निरन्जन साह प्रकाशित: २०७९-२-११ गते ११५३ पटक हेरिएको
गौशाला , महोत्तरी
गौशाला नगरपालिकामा नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई आज गौशाला नगर पत्रकार संजालद्वारा सम्मान गरिएको छ । वैशाख ३० गते सम्पन्न चुनावमा नवनिर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुलाई आज पुरानो नगरपलिकाको हलमा एक कार्यक्रम बिच दोसल्ला ओढाई सम्मान र पूर्व मेयर शिवनाथ महतोलाई बिदाइ समेत गरेका छन् ।
साथै गौशाला नगर पत्रकार संजालको कार्यालय नवनिर्वाचित नगरप्रमुख डा. दिपेन्द्र महतोले समुद्घाटन समेत गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा पुर्व मेयर शिवनाथ महतो नव निर्वाचित मेयरलाई शुभकामना दिदै सफल कार्यकालको कामना समेत गरेका छन् ।
महतोले नव निर्वाचित नगर प्रमुखलाई आफु संग भएको अनुभव अनुसार सल्लाह सुझाव दिएर अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नवनिर्वाचित नगरप्रमुख आफ्नो बिचार राख्दै सबैको साथ र सहयोगबाट मिलेर गौशाला नगरपालिकाको बिकासको लागि लागिपर्ने बताएका छन् । साथै उनले गौशालाका संचारकर्मीसंग सल्लाह सुझाव लिएर समन्वय गरेर अगाडी बढ्ने बताए । उनले भने ‘म संग नलेज छ। तर अनुभव पुरानो मेयर जियुसंग भएकोले म उहासंग सल्लाह सुझाव लिएर कार्य गर्ने छु।” उनले गौशाला नगरपत्रकार संजाललाइ धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेका छन्।
गौशाला नगर संजालका अध्यक्ष रामनारायण महतोको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा संजालका उपाध्यक्ष ममता शर्माले स्वागत राखेकी थिइन् । त्यस्तै कार्यक्रममा नगर प्रमुख डा. दिपेन्दर महतो , उप प्रमुख रेणु महतो ,पुर्व मेयर शिवनाथ महतो ,१२ वटा वडाका वडा अध्यक्ष लगायत संजालका सम्पूर्ण पधाधिकारी उपस्थित रहेका थिए